ए राजेन्द्र महतो ! तिमीहरुले नेपाली नागरिकता च्याते हामी घर घरमा खसी काट्छौँ, दिपावली मनाउँछौ – Complete Nepali News Portal
January 7, 2017	1,568 Views
टाढाको देउता भन्दा करेसाको भुत नै प्यारो हुन्छ । आफू बिरामी परिएला, गारोसाँग्रो पर्ला, मर्दा मलामी, बिहेमा जन्ती यी हरेक अवस्थामा काम लाग्ने नजिककै भुत हो । त्यसैले टाडाको देउता सुधार्न खोज्नु या गाली गर्नु भन्दा बरु करेसाको भुतलाई नै बसमा राख्न सके फाईदा होला भन्ने लाग्छ ।
अहिले पुरै विश्वमा ड्रोनाल्ड ट्रम्पको चर्चा परिचर्चाले प्राथमिकता पाएको छ । उनी एक शक्तीशाली देशको राष्ट्रपती हुनुको हैसियतले उनले गरेका साना मात्रा कुराले पनि बिश्वमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले त्यता तिर ध्यान तानिनु पनि स्वभाबिक छ । यसो भन्दैमा अमेरिकाको राजनितिक माहौलमा नै रुम्मलिएर बस्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हैन । किनकी हामी हाम्रै राजनिती देखि वाक्क दिक्क छौं । आफ्नै देशको राजनितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेका छैनौं । दिन प्रतिदिन अप्रीय खबर एकपछी अर्को सुन्नुपरेको छ । बरु यो बेथितिलाई हटाउनको लागि चाहिँ बढी समय खर्चने होकी ? किनकी हामीले र हाम्रो कयौँ आगामी पुस्ताले प्राण उत्सर्ग गर्ने पबित्र भुमी हो नेपाल । हामिले एक छाक मात्र खाएर भएपनी देश चुस्त दुरुस्त राखिदिन सक्यौ भने हाम्रा पुस्ताले तीन छाक निर्धक्क खान सक्ने छन । नेपालीहरु कुनै देशको अधिनमा नबसी स्वतन्त्र तवरले स्वभिमानी भएर बाँच्न सक्नेछन । अनि अहिलेको पुस्ताले समेत अवसरकै लागि बिदेशिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ती पाउला ।
नत्र देशका मेरुदण्ड युवा पुस्ता फेसबुक, ट्विटर लगायत समाजिक सञ्जाल र सडक चोक चोकमा बिरोध गरीरहने, नेतृत्व चाहिँ नसुनेझै गर्दै देश लुटिरहने, स्वाभिमान बेचिरहने र बिस्तारबादीका नाईके हरुलाई ज्वाईलाई जसरी पालिरहने बाहेक केही हुन सक्दैन । पाहुनालाई स्वागत गर्ने नाममा हामी रित्तिन हुँदैन भन्ने हो । हाम्रो समाजमा हामीले सबै भन्दा बढी स्वागत सत्कार गर्ने ब्यक्ती ज्वाइँ हो । उही ज्वाइँ पनि मध्यरातमा घर भित्र झ्याल फोरेर छिर्‍यो भने बेतको लौरोले बजाईन्छ । आखिर गलत तरिका अपनाउँदा ज्वाईलाई त माफी दिन सकिन्न भने भुकम्पमा आफन्त गुमाएको र सारा सम्पत्ती गुमाएर शोकमा रहेका नेपालीलाई अझ दु:ख दिने गोराहरुको दास ईण्डियन राष्ट्रपतीलाई सरकारले जसरी स्वागत गर्‍यो हामिलाई पच्ने कुरा भएन । यस कुराले यो सरकार प्रती नेपालीको मन कुँडिएको छ ।
अब कुरा गरौं आफुलाई मधेशको राजनितिक दल हौ भनेर दाबी गर्ने, जनताको मन जितेर एक सिट पनि ल्याउन नसक्ने, सदैब सिधा नेपाली हरुलाई दुख दिन पाउँदा खुसी हुने पानीमरुवा हरुको बारेमा । आफ्ना माग पुरा गराउन मानवियता सम्म बिर्सिने, एम्बुलेन्स बाट बिरामी थुतेर मार्ने, कृयापुत्रीलाई समेत लेखेट्ने, देश रोहिरहेको बेलामा मलमपट्टि लगाउनुको साटो अझ पीडा दिने र माग पूरा गराउन घुर्काउनेको बारेमा ।
बर्षौं देखि पैतालामा बिजेको काँडा जब खिल बन्छ त्यसले दिने दु:ख कम्ती पिडादायी हुँदैन । संधै पिरोलिरहने काँडा निकालीने कुरा जब पिडितले थाहा पाउँछ उसको मन भित्रै देखि निकै खुसी हुन्छ । अझ त्यो खिल अप्रेसन नै नगरी आफैँ जान लागेको जब बुझिन्छ त्यसपछि त झन हर्षको सिमानै रहँदैन । हो यस्तै खिल निक्ले जस्तै खुसी हुनेछन नेपाली जनता राजेन्द्र महतो जस्ताले नेपाली नागरिकता त्याग्दा । जो बाउ भन्दा पहिले जन्मियो । जसको पुस्ता बेलायती कम्पनीको दास बन्दैमा बित्यो । जसलाई इण्डियनको ग्राईण्ड डिजाईन पूरा गर्नको लागि खटाईयो, बेलायती दासहरु र नेपालका पनि बेलायती दासका गोठालाहरु मिलेर उनको बाउ भन्दा पहिले नेपाली नागरिकता भिराईयो । हो यस्ताले नागरिकता च्यात्दा नेपाल आमा हर्षले रुनेछिन । नेपालको हिमाल पहाड तराईले खुसिको गित गाउने छन । हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपाली हरुले घर घरमा खसी ढाल्ने छ्न, भोज गर्ने छन र यसको खुसियालीमा दिपावली गर्ने छन । म कदापी नेपाली नागरिकता च्यात्न सक्दिन, म नेपालको झण्डा जलाउन सक्दिन, म मेरो आमालाई लात मारेर सौतालाई आमा भन्न सक्दिन । बरु म टुहुरो बनेर बस्न तयार हुन्छु तर कदापी गद्दारी गर्न सक्दिन । किनकी मेरो नशा नशामा नेपाल बगिरहेको छ । मेरो रातो झण्डामा मेरा पुर्खाका रातो रगत लतपतिएको छ ।
मेरो चन्द्र सुर्यमा संसारको शिर मेरो प्यारो सगरमाथाले चुम्बन गरेको छ । जसले उपहारमा नेपाली नागरिकता पायो । जसलाई देश सिध्याउनकै लागि गद्दारहरुले नागरिकता भिराए । हो ती मध्ये कोही जिउँदो छ भने सबैभन्दा पहिले तिनको गर्धन छिनाल्न सक्नुपर्छ, कानुन छैन भने कानुन निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ । हामी नेपाली कति सहनशिल छौँ । मानवता सम्म बिर्सेर महिनौ अन्नपानी बन्द गराउने कुत्ताहरुलाई जिउ जिउ गर्छौँ । आउ मिलेर जाँउ भन्छौ । जो नेपाली नागरिकनै हैन, जसलाई देशको सद्भाव बिथोल्न, जसलाई देश टुक्राएर ईण्डियामा गाभ्न भनेर नेतृत्व गर्न पठाईयो उसैलाई मन्त्री जस्तो पद दिन्छौं । अनि कसैले बिरोध गरे कति सजिलै भनिदिन्छौँ पत्त्थरको जवाफ फुलले दिनुपर्छ । एकपटक हैन, पटक पटक धोका हुँदानी उसैको चरणमा पर्ने कस्तो राष्ट्रप्रेम हो तिम्रो नेता ज्यु ??? यदि नेपालमा नभएर यदी यो केश चाईना, अरब, जापान, अफ्रिका कतै हुन्थ्यो भने राजेन्द्र महतो जस्तालाई दशैमा खसी मार हाने जस्तो मार हानेर अहिले सम्म २० पिण्डा खाईसकेको हुन्थ्यो होला ।
हाम्रोमा खुलेआम देशको अस्मिता बिरुद्द धावा बोल्दा पनि कोहि चुईक्क बोल्दैन, बरु उसै संग नारिएर हिँडछन । यी सबै कुरा हुनुमा एउटै कारण छ सत्तालिप्सा । सत्ता अफुले पाउने भएसी यिनले आफ्नै आमा बेचिदिन्छन । देशको हित बिपरीत सन्धी सम्झौता हुनु, देश द्रोहीलाई संरक्षण दिनु त निकै सामान्य कुरा भैहाल्यो । नराम्रा, गद्दारी नेतृत्व पंङ्तिमा पनि कोही असल मान्छे छ भने लाखौं बिहारीले लिएको नागरिकता जफत गरोस । जब यी सबै बिहारीका नागरिकता खारेज गरिन्छ अनि हाम्रा तराईमा बस्ने राष्ट्रप्रेमी दाजुभाई लगायत सम्पुर्ण नेपालीले सन्तोषको श्वास फेर्न पाउने छन । हाम्रा मिचिएका सिमानाका खम्बाहरु एक एक यथा स्थितिमा फर्काईयोस । बेलायती कम्पनीका दास ईण्डियन भैया हरुले ओगटेर बसेको हाम्रो प्यारो भुमी फिर्ता गराएर ग्रेटर नेपाल बनाउन पहल गरोस । अन्तराष्ट्रीय अदालत गएर विश्वमा नेपालीको साहस देखावस । कोही छ त्यस्तो नेतृत्व अहिले सम्मको भन्दा फरक ? भाषण हैन युवा पुस्ताको नेतृत्वको हामिलाई कार्य क्षमता हेर्नुछ । हामी नेपाली जनता काम चाहन्छौं आफ्नो स्वाभिमान कायम भएको देख्न चाहन्छौं ।
यूस नेपाल न्युज बाट साभार